Lewandowski Oo Kulan Qarsoodi Ah La Qaatay Wakiilkiisa, Go’aankii Uu U Laqimay & Real Madrid Iyo Chelsea Oo Uu Ka Farxiyey – GOOL24.NET
Lewandowski Oo Kulan Qarsoodi Ah La Qaatay Wakiilkiisa, Go’aankii Uu U Laqimay & Real Madrid Iyo Chelsea Oo Uu Ka Farxiyey
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Robert Lewandowski ayaa kulan qarsoodi ah la yeeshay wakiilkiisa Pini Zahavi, kaas oo uu kagala hadlay mustaqbalkiisa.
Kulan oo ahaa casho ayaa uu weeraryahankan 29 jirka reer Poland waxa uu ugu sheegay wakiilkiisa inuu doonayo inuu ka tago kooxda Bayern Munich, isla markaana uu dhegaysto dalabyada kooxaha raadinaya.
Real Madrid iyo Chelsea ayaa marar dhowr ah lala xidhiidhiyey inuu tegayo, hase yeeshee, Bayern Munich ayaan doonaynin inay lumiso laacibkeedan u dhaliyey goolasha ugu badan oo saddex sannadood ka hadhsan tahay heshiiskiisa.
Wargeyska SunSport ayaa soo bandhigay sawirrada kulanka casharada sirta ah oo ka dhacay magaalada Munich gaar ahaan maqaaxida cuntada ee Izakaya oo lagu sameeyo cuntooyinka Asia, kuna yaalla badhtamaha Magaalada Munich.
Lewandowski oo dhowaan ay isku dhaceen wakiilkiisii hore ee Cezary Kucharski oo toban sannadood ay wada shaqaynayeen, ayaa bishii February u wareegay wakiilka Yuhuudiga ah ee Zahavi oo xidhiidh dhow la leh Chelsea, isla markaana ka dambeeyey heshiiskii qaaliga ahaa ee Neymar uu ugu wareegay PSG xagaagii tegay.
Weeraryahankan hore ee Borussia Dortmund ee Lewandowski ayaa Bayern Munich waxa uu xili ciyaareedkan ku guuleystay kabta dahabka ah ee horyaalka Bundesliga, waxaana uu dhaliyey 29 gool, hase yeeshee, waxa kale oo uu noqday ciyaartoygii koowaad ee aan ahayn Jarmal ee Munich u dhaliya goolasha ugu badan.
Real Madrid ayaa ah bartilmaameedkiisa koowaad sida la aaminsan yahay, iyadoo kooxduna ay si dhow xaaladdiisa ula socoto, sababtoo ah waxay u baahan yihiin weeraryahan awood badan maadaama uu Karim Benzema shan gool oo kaliya u dhaliyey xili ciyaareedkan oo dhan horyaalka LaLiga.
Lewandowski oo Bayern Munich ay sannadkii 2014 heshiis xor ah kaga qaadatay Borussia Dortmund ayaa ay adag tahay in kooxdiisu si sahal ah kusii deyso, hase yeeshee, marka uu suuqu furmo Koobka Adduunka kaddib ayaa la ogaan doonaa kooxda uu ka ciyaari doono sannadka dambe.